Uqinisekiso lomgangatho-iSaky Steel Co, Ltd
Umgangatho yinxalenye ebalulekileyo ye-SAKY STEEL Business Principles. Umgaqo-nkqubo osemgangathweni usikhokela ukuba sihambise iimveliso kunye neenkonzo ezigqitha kulindelo lwabathengi kwaye zihlangabezane nayo yonke imigangatho. Le migaqo isincedile ukuba sifumane ukwamkelwa njengomthengisi othenjiweyo kubathengi kwihlabathi liphela. Iimveliso ze-SAKY STEEL zithembekile kwaye zikhethwe ngabathengi kwihlabathi liphela. Le ntembeko isekwe kumfanekiso wethu osemgangathweni kunye nodumo lwethu lokuhambisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokungaguqukiyo.
Sinemigangatho esemgangathweni esisinyanzelo ekuchasene nayo ukuthotyelwa kuqinisekiswa ngophicotho-zincwadi oluqhelekileyo kunye nokuzihlola nokuhlola komntu wesithathu (BV okanye SGS). Le migangatho iqinisekisa ukuba sivelisa kwaye sinikezela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kwaye zihambelana nomzi mveliso ofanelekileyo kunye nemigangatho yolawulo kumazwe esisebenza kuwo.
Kuxhomekeke kwisicelo ekujongwe kuso kunye neemeko zokuhanjiswa kobuchwephesha okanye ukucaciswa kwabathengi, iintlobo ezahlukeneyo zovavanyo zinokwenziwa ukuqinisekisa ukuba imigangatho esemgangathweni iphezulu iyagcinwa. Imisebenzi ixhotyisiwe ngovavanyo oluthembekileyo kunye nezixhobo zokulinganisa kuvavanyo olonakalisayo nolungonakalisiyo.
Zonke iimvavanyo zenziwa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo abasemgangathweni ngokuhambelana nezikhokelo zenkqubo yoQinisekiso loMgangatho. Incwadi ebhaliweyo 'yokuQinisekiswa kweMigangatho' imisela ukwenziwa malunga nezi zikhokelo.
Ukuhlala isixhobo esibukekayo
Uvavanyo lweCS Chemical Composition
Ukuqina kovavanyo lwe-HB
Ukuqina kovavanyo lwe-HRC
Ukuvavanywa komhlwa kwangaphakathi
ISebe lokuthumela ngaphandle:
ISebe elithumela ngaphandle iB:
Ukuba unemibuzo malunga iimveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala phakathi iiyure ezisi-8.